खै दूरी कायम …? - Pradesh Today
Homebreaking-newsखै दूरी कायम …?
खै दूरी कायम …?
घोराही, २ जेठ ।
सरकारले पाँचजना भन्दा धेरै संख्यामा सार्वजनिक ठाउँमा भेला नहुन अनुरोध गरेको छ । कोभिड–१९को संक्रमणबाट सतर्कता अपनाउनको लागि सरकारले सार्वजनिक स्थानमा धेरै संख्यामा भेला हुन नपाउने नियम बनाएको छ ।
तर सरकारका प्रतिनिधिहरूबाट नै नियमको उल्लंघन भइरहेको छ । दिनप्रतिदिन कोभिड–१९ का बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गईरहेको छ । अहिले यो घेरामा दाङ परेको छ ।
छिमेकी जिल्लाहरूमा कोभिड–१९ बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गईरहेको स्वस्थ्य मन्त्रालयले जनाईरहेको समयमा भिडभाडको बीचमा बालबालिकाको सघन उपचार कक्षको उद्घाटन गरिएको छ ।
प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री सामान्य दिनको झल्को दिने गरी उपचार कक्षको उद्घाटन गरे । बुधबार बिहानै आफ्ना कार्यकर्ता र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरूको भिडमा उद्घाटन गरे ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्थापना भएको एनआइसियु/आइसियु बेड, पिसिआर मेसिनलगायतका दश बेडको आइसियु, भेन्टिलेटरसहितको एनआइसियु र पिआइसियु (बालबालिकाको सघन उपचार कक्ष) को उद्घाटन गर्ने क्रममा नियम उल्लंघन गरेका हुन् ।
कोभिड–१९ लड्ने भनेकै मुख्य औषधि सामाजिक दूरी हो । भिडभाड कम गर्न र सामाजिक दूरी कायम गर्न अनुरोध गरिरहेको समयमा मुख्यमन्त्री पोख्रेलले नै नियमको उल्लंघन गरे ।
त्यही भिडमा त्यही जमात लिएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थलगत निरिक्षणसमेत गरे । त्यति मात्र होइन मुख्यमन्त्रीसँगै भएका व्यक्तिहरूले मास्क साथमा भएपनि अधिकांशले लगाएका थिएनन् । हातमा ग्लोप्स पनि थिएन् ।
दाङबाट चुनाव जितेर मुख्यमन्त्री भएपछि पहिलोपटक राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निरिक्षण गरेका थिए । मुख्यमन्त्री त एउटा मुख्य प्रतिनिधि पात्र हुन् जो सरकारकै नेतृत्वकर्ता भएर पनि कायम गर्न सकेनन् ।
सरकारले सबै सरकारी कर्मचारी पनि खोल्ने अर्को निर्णय गरेपछि पनि सामाजिक दूरीको नियम उल्लंघन भएको छ । कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूको सेवा लिन आउने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । एउटै कार्यालयमा धेरै सेवाग्राहीहरू सेवा लिन आउने र घण्टौ समय बिताउने हुँदा झनै जोखिम बढ्दै गएको छ ।
त्यसैगरी पसलहरूमा पनि सामान लिनेहरूको भिड बढ्दै गएको छ । यि भिडभाड हुने स्थानहरूमा सामाजिक दूरीलाई ख्याल गरिएको छैन् । ‘सबै प्रकारका ग्राहकहरू आउँछन्, आफू नै असुरक्षित भएर सेवा गर्नुपर्छ’ घोराहीको बैंकमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने ‘कोभिड–१९को यस्तो महामारी छ ।’
बैंकमा निकै भिड हुने हुँदा सामाजिक दूरीको पनि सम्भव नभएको उनले बताए । ‘ग्राहकहरूलाई फर्काउन पनि नमिल्ने’ उनले भने ‘सेवा दिदा सामाजिक दूरीको समस्या छ ।’
बैंकमा धेरै नै भिड लाग्ने गरेको छ । अधिकांश बैंकको कार्यालय नै साँघुरो हुने हँुदा सामाजिक दूरीको पनि समस्या देखिन्छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी भिड हुने भनेको वित्तीय संस्था, खाद्यान्न पसलहरू, सरकारी कार्यालयहरू हुन् ।
डेढ महिना बढिदेखि भएको लकडाउन केही दिन यता केही खुकुलो पारिएको छ । फलफूल, तरकारी बेच्नको लागि घर–घरमा पुग्ने गरेका छन् । कोही डोको त कोही ठेला अनि अटोमा पनि फलफूल तरकारीहरू लिएर बेच्ने गरेका छन् । तर त्यहाँ पनि सामाजिक दूरीको समस्या देखिएको छ ।
एउटा व्यापारीले एउटा घरमा फलफूल लिएर जाने त्यसपछि त्यस आसपासका सबै छिमेकी, बटुवाहरू भेला भएर किनमेल गरिरहेका छन् ।
यसले झनै जोखिम तुल्याएको छ । ‘मास्क खोई भनेर एक उपभोक्ताले सोधिरहदा ति ठेला व्यपारीले भनेका थिए ‘मास्क त प्रहरीलाई छल्नको लागि लगाउने हो, गोजीमा छ ।’ उपभोक्ताले तरकारी नै नकिनेर फर्किएका थिए ।
धेरैजसो डुुलुवा व्यापारीहरूले मास्क गोजीमा राखेर बेच्ने गरेका छन् । ‘बन्दाबन्दी खुकुलो बन्दै गएको छ, बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएको, सामाजिक दूरी कायम गरिएको छैन्’ घोराहीकी वर्षा कुमालले चिन्तित गर्दै भनिन् । पछिल्लो समयमा सामाजिक दूरी नै कोभिड–१९को लागि जोखिम बढ्दै गएको उनले बताइन् ।